विचारधाराहिन राजनीतिले गर्दा नै गोर्खा राजनैतिक शिकार बनेका हुन् - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारविचारधाराहिन राजनीतिले गर्दा नै गोर्खा राजनैतिक शिकार बनेका हुन्
विचारधाराहिन राजनीतिले गर्दा नै गोर्खा राजनैतिक शिकार बनेका हुन्
October 15, 2020 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि मुख्य समाचार, म्यागजिन 0
गोर्खाल्याण्ड चाँही कुनै विचारधारा होइन है। मैले धेरैको मुखबाट सुनेको छु ‘मेरो विचार गोर्खाल्याण्ड हो भनेर। गोर्खाल्याण्ड त लक्ष्य हो। विचारधार होइन। लक्ष्यसम्म पुग्नलाई विचारधारा चाहिन्छ।
हामी भन्छौं, केन्द्रले यो गरेन् त्यो गरेन् अनि जुन राज्यमा हाम्रो किपटलाई कुटनीतिक रुपमा गाभेको छ, त्यो राज्यलाई हामी चिहानको दर्जा दिने गर्छौं। अनि भन्छौं, बङ्गाल हाम्रो चिहान हो, चिहानमा गोर्खा बस्दैनौं।’
यो नारालाई हामी खोलामा गीत गाएजस्तो गाउँछौं।
भारत देशमा ‘हामीलाई हाम्रो जातीय चिन्हारीको खाँचो छ’ भन्दै जातीय चिन्हारीको लागि धेरै नक्कली ( अचेलको भाषामा ‘फेक’) आन्दोलन गरिसकेका छौं। धेरै शहिदहरू पनि जन्माइसकेका छौं। धेरै भन्दा धेरै नोक्सान खपिसकेका छौं ।
तर पनि हामी लक्ष्यमा भने पुगेका छैनौँ।
यो प्रश्न उठ्छ र उठ्नु स्वाभाविक पनि हो ।
कसैले भन्छन्, ‘गोर्खा दरवान’ त कसैले भन्छन् ‘गोर्खा वीरबहादुर’ त कसैले भन्छन् ‘गोर्खा नेपालको’ त कसैले भन्छन् ‘देशको सिमाको रखवाला’। कति विचारा छौं हामी। हाम्रै माटोमा पनि अगोर्खाको पुच्छर नसमाई हाम्रो माटोमा सास फेर्न पनि नसक्ने अवस्था आज भइसकेको छ।
पुर्खाको वीरगाथालाई हामीले पताललोकतिर पुऱ्याइसकेका छौं। आखिर किन भन्दा क्षणिकको स्वार्थपूर्ति गर्नपर्छ भन्ने मानसिकता हुँदा नै आज विश्वलाई नै थर्काएर विरताको इतिहास लेखेर बसेका गोर्खाहरू आज आफ्नै माटोमा भ्रष्टाचारी, दलाल आदिआदिको उपाधि लिएर लाज पचाएर आफ्नो जातिको लिलाम गरेर चौकी र पावर चाहिने भएको छौं।
अगोर्खा भारतीयहरूको नजरमा हामी आज यस्तै भइसकेको छौं।
यो सबै सुन्दा भन्दा दुःख लाग्छ तर पाँच मिनेटको लागि मात्र हो फेरि त बिर्सिहाल्छौं। किनभने हामी पैसाको अघि नतमस्तक भइहाल्छौं। यो हाम्रो खुनमा छ र नै पहिलो विश्व युद्धदेखिको आजसम्म यस्तै हुँदै आएका छौं। यो सबै किन हुँदैछ भनेर चिन्तन मनन गर्दा पाएको ठूलो गल्ती हो विचारधाराहिन राजनीति।
हामीले विचारधाराहिन राजननीति गरेकोले गर्दा नै गोर्खा समाजले आजसम्म राष्ट्रिय राजनीतिमा जग्गा नपाएको हो। भन्नुस्, हामीले कुन विचारधारालाई अङ्गालेर हिँडेका छौं ?
यो नै हो हाम्रो सबै भन्दा ठूलो लक्ष्य प्राप्तिको बाधा। हामी हाम्रो लक्ष्यमा पुग्ने हो भने एउटा विचारधारा अङ्गाल्न वा निर्माण गर्न नितान्त अनिवार्य छ। नत्र गोर्खा सन्तानको भारत देशमा हुनेवाला केही छैन। हुनेछ भने पटक पटक राजनीतिमा शिकार मात्र हुने छौं।
गोर्खा सन्तानको राष्ट्रिय चिन्हारी खुट्याउने नै हो भने पहिला विचारधाराको बिऊ रोप्न पर्छ।
खै त्यो काम गरेको ? सोचेको छ ? नेता नेतृत्वहरूलाई यो कुरा सुन्दा अचम्म लाग्ला तर यथार्थ हो। खाली भारत सरकार होस् या बङ्गाल सरकार उनीहरुलाई मात्र दोष दिने अनि सेटिङ गरेर चौकीमा बस्ने र निमुखा जनताको अगाडि चाँही फलाना ढिमकनालाई दोष खन्याउने? कहिलेसम्म यस्तो गरेर राजनीति रोटी सेक्ने हो?
बन्द गर्नु पर्छ यस्तो राजनीतिक संस्कार अनि अप्नाउन पर्छ विचारधारा। साँच्चै हामी लक्ष्यमा पुग्ने नै हो भने ।
जागौं। देश काल र परिस्थितिसँग हिँड्न सिकौं।
शिक्षक नियुक्ति, बिनय-अनित आफैले खनेको खाल्डो
विमल गुरुङ चाँडै पहाड फर्किनु पर्छ र पहाडको राजनीतिमा भाग लिनुपर्छ